pat - Wikibolana, raki-bolana malalaka
Jereo koa : pät, päť
16.1 Anarana iombonana
17.1 Anarana iombonana
18.1 Anarana iombonana
22.2 Anarana iombonana
pat ♦ X-SAMPA : ♦ AAI :
hasy Avy amin'ny dikantenin'i cotton teo amin'i Wikibolana anglisy.
pat ♦ X-SAMPA : ♦ AAI : fanononana ?
honahona, zetra, heniheny, swamp Avy amin'ny dikantenin'i swamp teo amin'i Wikibolana anglisy.
vato, taolam-boankazo Avy amin'ny dikantenin'i stone teo amin'i Wikibolana anglisy.
manavokavoka Avy amin'ny dikantenin'i bang teo amin'i Wikibolana anglisy.
efatra Avy amin'ny dikantenin'i four teo amin'i Wikibolana anglisy.
heloka, ota, raiben-keloka, fahotana Avy amin'ny dikantenin'i sin teo amin'i Wikibolana anglisy.
mangatsiaka Avy amin'ny dikantenin'i cold teo amin'i Wikibolana anglisy.
fehy handrotra, mamandrotra, mamatotra, mamehy, maminty, mandadina, mandrohy, mangaika, mangedragedra, mangehy, mifehy, alo Avy amin'ny dikantenin'i tie teo amin'i Wikibolana anglisy.
penina, volo Avy amin'ny dikantenin'i feather teo amin'i Wikibolana anglisy.
atova, fisaka, kapila, lovia, matrana, petaka, vilia Avy amin'ny dikantenin'i even teo amin'i Wikibolana anglisy.
mangatsiakaAvy amin'ny dikantenin'i cold teo amin'i Wikibolana anglisy.
efarina, efatra, fahefatra, fanefarana, fanefatra, fiefarana, fiefatra, inefatra, mahaefatra, manefatra, miefatra, mpanefatra, mpiefatra, tsiefatrefatra, voaefatraAvy amin'ny dikantenin'i four teo amin'i Wikibolana anglisy.
fehizoro, fiafia, vato Avy amin'ny dikantenin'i stone teo amin'i Wikibolana anglisy.
lavasalaka Avy amin'ny Wikibolana anglisy.
pat ♦ X-SAMPA : ♦ AAI : /pæt/
misafosafo, mitehaka, tehaka
fandriana, farafara, fikitrana, kibany, kitrara, lamaka
Hita tao amin'ny "https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=pat&oldid=28416025"
Anarana iombonana amin'ny teny zôo
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny zôo
Anarana iombonana amin'ny teny marsaley
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny marsaley
Anarana iombonana amin'ny teny bariay
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny bariay
Anarana iombonana amin'ny teny tiorka
Anarana iombonana amin'ny teny maia
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny maia
Anarana iombonana amin'ny teny magidanaon
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny magidanaon
Anarana iombonana amin'ny teny livônianina
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny livônianina
Mpamaritra amin'ny teny sinoa
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny sinoa
Anarana iombonana amin'ny teny letôna
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny letôna
Mpamaritra amin'ny teny trokese
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny trokese
Anarana iombonana amin'ny teny rembong
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny rembong
Anarana iombonana amin'ny teny pôiôma
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny pôiôma
Anarana iombonana amin'ny teny maranao
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny maranao
Anarana iombonana amin'ny teny manggarai
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny manggarai
Anarana iombonana amin'ny teny lamahôlôt
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny lamahôlôt
Anarana iombonana amin'ny teny bunun
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny bunun
Anarana iombonana amin'ny teny bintolò
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny bintolò
Anarana iombonana amin'ny teny takia
Zavatra tsy ampy/fanononana tsy ampy amin'ny teny takia
Voaova farany tamin'ny 22 Febroary 2020 amin'ny 10:40 ity pejy ity.